10 सर्वश्रेष्ठ स्थान दक्षिण इटाली भ्रमण गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 सर्वश्रेष्ठ स्थान दक्षिण इटाली भ्रमण गर्न
को न्यानो मौसम अझै भन्दा छैन. त्यहाँ अझै पनि समय र यो महिना दक्षिण इटाली भ्रमण गर्न एक राम्रो कारण छ! दक्षिण इटलीको केहि अद्भुत प्रस्तावहरू छन्. दक्षिण इटाली भ्रमण गर्न सर्वश्रेष्ठ स्थानहरू समावेश; नाटकीय तट को सुन्दर फैलिएको, सिद्ध तटों तस्वीर, मनमोहक तटीय टापुहरू, र ऐतिहासिक शहरहरू र शहरहरूको अधिकता. यो तल बस हाम्रो सूची साँघुरो गर्न कठिन थियो 10, तर यहाँ छन् 10 सबै भन्दा राम्रो ठाउँ दक्षिण इटाली भ्रमण गर्न.
1. को अमाल्फी तट
को भ्रमण बिना इटाली यात्रा के हो अमाल्फी तट? दक्षिणी इटाली को यस विशेष क्षेत्र सबैभन्दा सुन्दर र विश्व प्रसिद्ध मध्ये एक छ! नेपल्स देखि सलर्नो गर्न stretching, को अमाल्फी तट प्रस्ताव नाटकीय दृश्य, सुन्दर सहर भनेर हिमालहरू गले, र केही रोचक ऐतिहासिक साइटहरु.
यो सुरक्षित क्षेत्र यस्तो अमाल्फी रूपमा केही सुखद तटीय सहर विशेषताहरु, Erchie, नाबालिगहरु, र पोसिटानो - यी शहरहरूमा बहु रंगीन घरहरूको श्रृ that्खलाहरू छन् जुन स्ट्याक्स अप विरुद्ध स्ट्याक hillsides र तस्वीर उत्तम फोटो अवसर प्रदान गर्नुहोस्.
यसबाहेक, यस्तो Ravello मा Villa Rufolo रूपमा साइटहरु प्रदान अतुलनीय दृश्य भूमध्य सागर गर्न मार्फत.
सोरेंटो पर्यटकहरु सान्त्वनादायी पाउन भन्ने सुविधाहरु दुवै साथै बिक्री पुरानो सहरमा लागि अद्वितीय र उच्च अन्त antiquities छ. एक नौका छोड्दा यहाँ बाट Capri को Isle गर्न, र यो बन्द Pompeii लागि बिन्दु ठूलो जम्पिङ छ. तथापि, Sorrento यसको लागि पनि परिचित छ उत्कृष्ट उम्दा भोजन, आश्चर्यजनक cliff dwellings (कुनै तटों हुनत), र माउन्ट VESUVIUS को तेजस्वी दृश्य.
पम्पी गाडिहरु गर्न बोलोग्ना
यो मध्ययुगीन शहर भूमध्यसागर को चट्टानी तट साथ अवस्थित छ. यसको ritzy बन्दरगाह इटाली शीर्ष हटस्पट को छ. तपाईं यहाँ रहन चाहनुहुन्छ भने गर्मीयाम मा तपाईं सुरक्षित गर्न अग्रिम राम्रो बुक गर्न सक्छ आफ्नो चुनिएको होटल कोठा फास्ट माथि बुक रूपमा. हामी न्यानो मौसम को अन्त नजिकै छौं रूपमा, तपाईँले अन्तिम मिनेट बुकिङ केही भाग्य हुन सक्छ!
केही सुन्दर इतिहास, Paestum इटालियन माटो मा एक शहर हो, तर यो पुरातन युनानी द्वारा तिनीहरूले इटाली को यो भाग नियन्त्रणमा थिए जब स्थापित भएको थियो! त्यसपछि यो Poseidonia रूपमा समुद्रको भगवान पछि ज्ञात थियो.
एक्लै ग्रीक वास्तुकला लायक छ एक यात्रा भनेर मा राख्न निश्चित हुन तपाईंको यात्रा तीन तरिकाले संरक्षित ग्रीक हेर्न भनेर मन्दिर गएर बाहेक. सबैभन्दा पुरानो 550BC बारेमा बनाइएको थियो (दिन वा एक वर्ष लाग्न) र Hera को मन्दिर अचम्मको छ जो.
5. सर्वश्रेष्ठ स्थान दक्षिण इटाली भ्रमण गर्न: नेपल्स
नेपल्स, वा नापोलि, कुन भाषा मा निर्भर गर्दछ, इटाली तेस्रो ठूलो शहर हो. इमान्दार हुनु पर्दा, त्यहाँ दक्षिण इटाली को यो भाग केही धेरै विरोध दृश्य हो. केहि लाई, यो ठूलो छ, फोहर, अपराधले ग्रस्त, र झर्दै, अरूलाई यो नुकीला र वायुमण्डलीय छ. जो फिर्ता आफ्नो बाल blows, हामी अनुमान? One thing is for sure though. यो तटीय दक्षिणी शहर यसको आफ्नै व्यक्तित्व छ!
धेरै मनपर्ने इटालियन खाद्य पदार्थ उत्पत्ति नेपल्स र यसको आसपास यस्तो पिज्जा रूपमा क्षेत्रमा, र स्पेगेटी. यी व्यञ्जन गम्भीर यहाँ लिइएको र सामान्यतया छन् ताजा सुविधा, स्थानीय हुर्किसकेका सामाग्री. पर्यटक आकर्षण नेपल्स मा एक विशाल समावेश मध्ययुगीन महल, नयाँ महल, साथै Castel डेल Ovo को समुद्र तटीय गढ रूपमा. शहर भेसुभियसको छेउमा पनि छ, युरोपेली महादेशमा मा मात्र सक्रिय ज्वालामुखी.
6. सर्वश्रेष्ठ स्थान दक्षिण इटाली भ्रमण गर्न: Alberobello
यो Trulli वास्तुकला को उदाहरण सर्वश्रेष्ठ संरक्षित इटाली को सबै पाउन छ कि Alberobello को शहर अद्वितीय छ (राम्रो, त्यसैले म भनिएको थियो).
को Trulli शैलीमा निर्मित घरमा मोर्टार प्रयोग बिना चोटीदार पत्थर छतहरुको गरिएका छन् (हुनत, म कुनै निर्माता भनेर मलाई उद्धृत छैन हुँ). सबैभन्दा पुरानो घरमा 14 औं शताब्दीमा देखि तिथि र पूर्ण तेजस्वी, यसलाई एक अवश्य अवलोकन गर्नु र बनाउनु हो सुन्दर सहर दक्षिणी इटाली भ्रमण गर्न.
Monopoli गाडिहरु गर्न नेपल्स
7. सर्वश्रेष्ठ स्थान दक्षिण इटाली भ्रमण गर्न: Tropea
हेर, म अग्रिम तपाईं चेतावनी छु. यो ठाउँमा फोटो अवसर पागल हो. तपाईं वास्तविक कुरा बाहिर सम्झना छैन भनेर सावधान रहनुहोस्! को सुन्दर प्राचीन शहर Tropea को केहि सरासर चट्टानहरूको माथि र सडकबाट पार गरीएको छ संकीर्ण बलौटे समुद्र तट, यो हर्कुलेसक्लस्टर आफैले स्थापित गरिएको छ भने छ.
यदी तिमी पर्यटन, त्यहाँ दुई छन् भव्य चर्च Tropea मा पनि, सांता मारिया डेल Isola siltation को वर्ष भूमि पुल द्वीप र मुख्य भूमि बीच गठन परिणाम छ हुनत एक टापुमा बनाइएको थियो कि एक मध्ययुगीन चर्च छ. अन्य को गिर्जाघर छ; यो केवल चर्च ढोका बाहिर बसेर दुई unexploded बम WW2 देखि डेटिङ छ. स्थानीय भवन त आफ्नो चरण हेर्न संरक्षक सेन्ट सुरक्षित थियो विश्वास!
एक्लै चर्च दक्षिणी इटाली मा सबै भन्दा सुन्दर सहर को यो एक बनाउन. तपाईंले यसलाई प्रेम हुनेछ!
Tropea गाडिहरु गर्न भिबो मेरिना
काटानजारो Tropea गाडिहरु गर्न
कोसेनजा Tropea गाडिहरु गर्न
Tropea गाडिहरु गर्न Lamezia Terme
8. सर्वश्रेष्ठ स्थान दक्षिण इटाली भ्रमण गर्न: Capri
प्राविधिक एउटा सानो टापुमा, Capri तपाईं अन्वेषण गर्न भनेर एक भव्य शहर र marina छ. सारा द्वीप छ इतिहासको धनी र पौराणिक कथाहरु र एक राम्रो स्थान तपाईं क्षेत्र हुँदा भ्रमण गर्न.
तपाईं हेर्न कुराहरू खोजिरहेको भने, रोमी सम्राट टाइबेरियसलाई को घर (विला Jovis) अझै पनि टापुमा हेर्न प्रमुख स्थलहरू मध्ये एक छ र त निलो Grotto छ. को Waterfront गुफा मात्र हो डुङ्गा पहुँच र अनुकूल ज्वार त्यहाँ हुँदा मात्र (रद्द लागि त तयार).
9. सर्वश्रेष्ठ स्थान दक्षिण इटाली भ्रमण गर्न: Pompeii र Herculaneum
Pompeii र Herculaneum दुई रोमन सहर र गाउँमा थिए माउन्ट VESUVIUS फिर्ता सबै बाटो erupted गर्दा obliterated थिए 79 ई.
शायद सबैभन्दा दुई को प्रसिद्ध Pompeii को शहर छ, जो तपाईं अब वरिपरि लक्षविना हिड्नु र तपाईं क्षेत्रमा हुँदा अन्वेषण गर्न. एक भयानक 3,000 मान्छे शहर मा perished, तर तातो खरानी आज के मा भग्नावशेष immortalized. चेतावनी दिएको छ, यसलाई यहाँ राम्रो व्यस्त प्राप्त गर्न सक्छन्, त्यसैले तदनुसार योजना र तपाईं एउटा टिकट प्रविष्ट गर्न को लागि लाममा हुन सक्छ सम्झना.
ओह, पनि Herculaneum को नजिकै शहर सानो छ र एक wealthier जिल्ला थियो र कसरी धनी रोमी एक पटक बस्ने एउटा उदाहरण दिन्छ. तपाईं एक इतिहास शौकीन हो यदि Herculaneum पुरातात्त्विक क्षेत्र भ्रमण गर्न निश्चित!
बारी पम्पी गाडिहरु गर्न
10. सर्वश्रेष्ठ स्थान दक्षिण इटाली भ्रमण गर्न: Aeolian द्वीप
दक्षिण इटाली भ्रमण गर्न सर्वश्रेष्ठ स्थान हाम्रो नामावलीमा. को Aeolian द्वीप! तिनीहरूले इटाली को हवाई रूपमा परिचित छन्. यो सिसीली उत्तर द्वीप को एक स्ट्रिङ हो, र यो मुर्ख भव्य छ. रूपमा अचम्मको यो हुन सक्छ रूपमा, शायद जो कोहीले यो बारेमा थाह छ. तर व्यक्तिहरूलाई गर्ने फिर्ता आउने राख्नुहुन्छ. किनभने तिनीहरूले आफूलाई सबै ठाउँ पाउनेछन् थाहा.
वरिपरि सुन्दर कालो समुद्र तट zip स्कूटर भाडामा लिने गर्न. Pollara मा सूर्यास्त aperitivo. Stromboli को आसपास द्वीप वरिपरि नौका विहार, Panarea, र Lipari. Vulcano मा सल्फर पानी स्पा संग बाफिलो प्राप्त. ग्रीक वाइब (कुनै आश्चर्य - टापुहरूमा Aeolus लागि नाम थियो, बतास को भगवान, ग्रीक settlers द्वारा). नुन घरहरू किनारमा तल spilling घिस. र तपाईं आफ्नो प्रियजनलाई एक ठूलो गोप्य भनेर मात्र केहिपनि शेयर मा हो जस्तै महसुस!
भित्रिया टिप: तपाईं अगस्ट मा भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भने अग्रिम यहाँ इस्टर-अक्टोबर र बुक बीच यात्रा!
दक्षिण को इटाली यात्रा को लागी तपाईको झोला प्याक गर्न को लागी तयार छ? त्यसपछि आफ्नो रेल टिकट बुक एक ट्रेन सेव मिनेट भित्र. कुनै अतिरिक्त शुल्क, कुनै जायका, रमाइलोको!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 सर्वश्रेष्ठ स्थान दक्षिण इटाली भ्रमण गर्न” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-places-visit-south-italy%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#italyholiday #SouthItaly #SummerinItaly #TrainTravelItaly italyvacation रेल यात्रा